U qaado Viking Oddmar illaa 24 heer oo ay ka buuxdo akhlaaq wanaag | Androidsis
Oddmar waa mid ka mid ah cayaaraha madal si fudud loogu raaxeysto ciyaar ciyaar iyo sahaminta mid kasta oo ka mid ah heerarkan ballaaran markii ugu horreysay. Mid ka mid ah ciyaarahaas oo soo baxa sannad kasta oo aan ku dheganaano illaa aan ka dhammeyno.
Un hawlgelinta farsamo bahalnimo dhammaan heerarka oo wax walba ay ka muuqdaan, in kasta oo hubaal waxaad ku nuugi doontaa qaylada iyo taaha ay sii daayeen Viking-keena qosolka iyo xiisaha badan. Oddmar waa ciyaar faahfaahin ah taas oo aan ku jeclaano sababtoo ah sida ugu wanaagsan ee loogu talagalay heerarka oo dhan.
1 Madal si weyn kor ugu qaadeysa tayada tayada
2 Iyadoo tixraacyo cad laga siinayo Nintendo
3 Iyo heerar baaxad leh
6 Muuqaal rasmi ah
Madal si weyn kor ugu qaadeysa tayada tayada
Si aan u nidhaahno Oddmar si weyn ayuu kor ugu qaaday heerka tayada, waxaan ula jeednaa maxaa yeelay hadda ma awoodi doontid inaad heshid wax madal ah leh sawiro fiican. Saas ma aha, waa inaad ka shaqeysaa dejinta, dhawaqyada jilayaasha, jawiyada muuqda ee midabada iyo faahfaahinta, animations kaamil ah oo gebi ahaanba siman iyo naqshadeynta heerka taas oo ah inaan ku fikirno wax yar si aan uga baxno dhibaatooyinka qaar kuwa aan wajaheyno
Oddmar waa ku saleysan hal-ku-dhigga hal-abuurka ah waxaanan gasheynaa kabaha halyeeyga gadhka leh si aan ugu qaadno waxyaabo badan. Maxaa la dhahaa dhammaan jawiyada, jilayaasha iyo dejimaha waxay leeyihiin taabashada gaarka ah ee Viking taasoo ka dhigeysa ciyaar gaar ah. Mobge shaqo fiican ayey ka qabatay arintan waxaanan ku bogaadin karnaa oo kaliya heerka sare iyo taxadarka kulankaan loogu talagalay Android.
Qaarna kamaanaan hadal tixraacyada aaladaha khuraafaadka sida Super Mario Bros. Waa inaad ka guuleysataa kuwa kaa soo horjeeda adoo ka boodaya iyaga, markaa u diyaar garow inaad si wanaagsan u cabirto boodadaada. Muuqaalka kale ee xiisaha leh ee Oddmar ayaa ah in mar kasta oo uu boodo, ay ka tagi doonto raad likaha oo daqiiqadaha qaarkood aan u isticmaali karno sii wadista boodka.
Iyadoo tixraacyo cad laga siinayo Nintendo
Madal kasta oo ku faaneysa inay tahay inay tahay inay tixraac ka dhigto ciyaarta Nintendo. Oddmar iyaga ayaa leh oo waxay ku maareysaa inay siiso dhamaadka ciyaarta ciyaar socota mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan sanadkaan 2019. Waxay ku qoran tahay liiskayaga ugu fiican ciyaaraha 2019; waxaan rajeyneynaa inaadan seegin midka 2018.
Ciyaartu waa wax iska fudud waana qaban doonnaa Oddmar u dhaqaaq dhinaca bidix ama midig adigoo riixaya dhinaca bidix, maxayna u yihiin boodbooyin iyo dhaqdhaqaaqyo gaar ah oo aan wadno tilmaam. U bood bood macquul ahaan. Runtu waxay tahay in si buuxda loo qaaday oo ay tahay mid dareen ku leh dhaqdhaqaaqa.
Waxaan nahay ciyaar naga saari doonta qaar baa ku qosla in mid kale oo cabaadaas qaba iyo dhawaaqyo uu Oddmar nuugayo. Iyagu waa la wada hagaajiyaa si loo gaadho saamaynta la doonayo marka ninka saboolka ahi badda ku dhaco ama uu ka boodo boodada si ay ula dhacaan qaar ka mid ah cadawga aan heli doonno.
Iyo heerar baaxad leh
Meelaha ugu badan ee aan ku leenahay suuqa, marka laga reebo kuwa sharafta leh, inta badan dhererkoodu aad ayuu u gaaban yahay ee heerarka. Oddmar waxwalba wuu siiyaa wuuna naga yaabiyaa heerar baaxad leh oo aan ku badbaadinayno horumarkayaga haddii ay wax ku adkaadaan dib ugu noqoshadooda. Waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan kulankaan oo in badan balan qaada taasna ficil ahaan waa wax lagu farxo in lagu ciyaaro shaashadda AMOLED (haa, waan culusnahay, laakiin waa waxa ay tahay).
Oddmar wuxuu yimaadaa Android for kaliya ku guuleysta fasalkaaga mastarka sida loo sameeyo madal dhab ah. Naqshadeynta dabeecad aad u fiican, isugeyn jimicsi, jawi nool oo jawiga ugu fiican ku ridaya mid kasta oo ka mid ah dhacdooyinka, dhawaq toban ka kooban oo leh dhawaajin iyo saameyn kala duwan iyo, waxa la dhaho, heerarka si aad u wanaagsan ayaa dib loogu abuuray si aan ugu diyaarinno wax yar; habka, waa wadar ahaan 24.
Oddmar wuxuu geliyaa kahor iyo kadib noocyada astaamaha sidaa darteed waxaan fileynaa ciyaaro badan oo nuucaan ah waana mid aad iyo aad u mudan in la dhaho waxaad tahay ciyaaryahan mobilo ah waxaadna ka socotaa kombiyuutarada iyo konsollo. Ujeedo nooca ah waxaana laga helaa bilaash Google Play Store.
Aan maanta la barbar dhigin
Meel walba sixir buu ku siiyaa
24 heerar heer sare ah
In bogga sheyga uusan kujirin Isbaanish
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Oddmar, ama waa maxay fasalka Master-ka ee noocyada barnaamijyada
OPPO A1K: Nooca noocyadiisa kala duwan ee heerka soo-gelinta